Toddobaadkaan oo loo kuurgalayo isticmaalka aaladaha warbaahinta ee dhallaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Esteban Felix/TT
Toddobaadkaan oo loo kuurgalayo isticmaalka aaladaha warbaahinta ee dhallaanka
Isticmaalka aaladaha warbaahinta ee dhallinyarada
La daabacay fredag 14 februari 2014 kl 15.10
Golaha warbaahinta qaranka ayaa doonaaya in uu siyaabo kala duwan u iftiimiyo habka ay carruurta iyo dhallinyaradu maanta u adeegsadaan qalabka warbaahinta. Sidaasna waxaa sheegtay Martina Wagner oo hoggaamiye mashruuc ka ah Golaha Warbaahinta Qaranka:
- Waxaan inta lagu gudajiro toddobaadkaan soo gudbineynnaa qoraalo kala duwan oo ku saabsan isticmaalka aaladda meediyada ee carruurta iyo dhallinyarada. Waxaan kaloo soo saareynnaa aalad cusub oo loogu talagalay dadka la shaqeeya carruurta iyo dhallinyarada si loogu adeegsado kordhinta aqoonta meediyada iyo warbaahinta.
Toddobaadkaan ayaa loogu magacdaray Toddobaadka MIK, halka ay MIK u taagan tahay media- och informationskunnighet (aqoonta meediyada iyo warfaafinta). Waxaana loogu talagalay dadka waaweyn oo sida dhow ula shaqeeya carruurta, sida ay sheegtay Martina Wagner oo hadalkeeda ku dartay:
- Aqoonta meediyada iyo warfaafintu ayaa aqoon loo yeelanayo doorka uu qalabka warfaafintu kaga jiro bulshada. Intaas waxaa dheer oo ay ku saabsan tahay awoodda lagu helayo oo lagu cabbirayo macluumaadka warbaahinta iyo in si qotodheer loo eego macluumaadkaas. Waxaa kaloo ka mid ah sidii qofku u cabbiri lahaa fekerka uu doonayo in faafiyo iyo waxyaalaha ay aaladaha kala duwan ee meediyadu ka kooban yihiin. Waxaa iyaguna ka mid ah sida ilaha wararka looga raadsado internet iyo sida loo turjumo ama loo qiimeeyo sawirada iyo ilaha kala duwan ee macluumaadka.
Waxaa qoraal uu saaray golaha meediyada qaranka ka muuqda in farqi weyn u dhexeeyo hababka ay gabdhaha iyo wiilashu u dhaqmaan ama u isticmaalaan qalabka meediyada. Farqigaas ayaa ku yar carruurta toban sano jirrada ah, halka uu soo weynaado marka ay 12 sano jir dhaafaan. Gabdhaha ayaa iyagu aqlabiyad ku ah qalabka meediyada lagu sheekeysto, halka ay wiilashu u badan yihiin qalabka lagu cayaaro ama TV-spel. Wuxuu kaloo farqi ka jiraa hadalada ay isticmaalaan iyo sida ay internet isugu soo bandhigaan.
- Waxaa dhaqankooda ka muuqda caddeynta gabdho ama wiilal hadba kuwa ay yihiin maadaama ay ku jiraan xilli ay baaritaan ku hayaan aqoonsigooda shakhsiyadeed. Waxay kaloo isticmaalaan hadalo dhaqan ahaan caadi noqdey, iyo qaab ay kor isugu qaadayaan. Sidaasna waxaa yiri Michael Forsman oo ka hawlgala jaamacadda Södertörn isla markaasna ka mid ahaa dadkii qoraalkaan soo saaray.
Qoraalkaan ayaa loogu magacdaray Duckface/Stoneface oo loo la jeedo sida ay gabdhaha iyo wiilashu isu muujiyaan kolka ay sawiro iska qaadayaan. Duckface ayaa lagu magacaabaa kolka afka la soo yuubo oo loo ekeysiiyo sida afka shimbirta booloboolada, waxaana badanaaba isticmaala gabdhaha, halka ay wiilashu muujiyaan weji qabiid ah oo aan dhaqdhaqaaq lahayn. Sawirada ay badanaaba dhallinyaradu iska qaadaan waxay ka turjubaan sida ragga iyo dumarka ugu kala qaybsan yihiin bulshada dhexdeeda. Dhallinyaro gaareysa 150 arday oo wareysiga lala yeeshay waxay intooda badani sheegeen in ay u kala caddahay waxyaalaha lagu yaqaan gabdhaha iyo kuwa lagu yaqaan wiilasha.
Mar caalinka Michael Forsman wax laga weyddiiyey haddii uu u arko in ay tahay wax laga welwelo in farqi ballaaran u dhexeeyo gabdhaha iyo wiilasha, wuxuu ku jawaabey:
- Ma sheegi karo in ay noqon karto wax welwel laga muujiyo, balse waxaa laga fiirsan karaa sida uu u muuqdo iyo sida uu u shaqeeyo dadaalka dugsiyada laga wado oo ku saabsan sinnaanta ragga iyo dumarka. Waxay si gaar ah u taabaneysaa dugsiyada maadaama ay siyaasadda dugsiyada ka mid tahay in lagu iftiimiyo arrimaha sinnaanta ragga iyo dumarka oo ay ku dheehan yihiin hannaan waxbarasho oo aan jinsi-qoqob lahayn. Qoraalkanina wuxuu muujiyey mid taas ka soo horjeeda maadaama ay gabdhaha iyo wiilashu si cad u kala soocan yihiin. Sidaasna waxaa yiri Michael Forsman oo caalin wax ka dhiga jaamacadda Södertörn.